WWDC 2017 ichaitirwa muSan José (California) pakati paJune 5 na9 | IPhone nhau
Chimwe chezviitiko zvinotarisirwa nevakagadziri ndeye Yepasi Pose Vanogadzira Musangano (WWDC), izvo zvinowanzoitika mumwedzi waJune. Maminitsi mashoma apfuura Apple yakazivisa kuti iyo WWDC 2017 Ichaitika mune imwe yenzvimbo dzekufananidzira muSan José (California): iyo McEnery Convention Center, pakati paJune 5 na9.
Chiitiko chacho ichaunza pamwechete zviuru zvevagadziri munzvimbo ine kudzidza, mazano uye pamusoro pezvose, zvishandiso zveApple uye tekinoroji zvichave izvo zvinove zviripo kune wese aripo. Matikiti echiitiko ichi akatengwa pamadhora 1599, ayo anozove angangoita 1500 euros. Ivo vanogona kutengwa pane yepamutemo Apple webhusaiti kubva Kurume 27, zuva mune chokwadi, vachaneta.
WWDC 2017, chiitiko chekuvandudza chikuru chegore
Tekinoroji yega haina kukwana.
Tekinoroji inofanirwa kusangana nehunyanzvi hunyanzvi uye hunhu, kuti igadzire mazano matsva uye zviitiko zvinosundira nzanga kumberi. Iri zhizha richaunza pamwechete zviuru zvepfungwa dzakajeka dzinomiririra akawanda akasiyana maonero, zvishuwo uye matarenda kubatsira kuchinja nyika.
Sezvauri kuona, ndiyo kutaura tanga izvo zvatinoona patinopinda yepamutemo webhusaiti yeWWDC. A Oode kuyanana uye nehunyanzvi kugadzirisa nyika. Hatigone kukanganwa kuti Apple yakagara ichidzivirira maonero aya. Isu tinogona zvakare kucherechedza ichi chiratidzo chepasirese icho kambani yaTim Cook ine mumifananidzo padandemutande: vanogadzira vachikwazisana maoko, kugovana ruzivo, kutaura ...
Uye ndizvo zviri WWDC 2017, inzvimbo iyo iwe yaunogona kudzidza nehurukuro neApple mainjiniya, nezviratidziro, mibairo yeakanakisa ekushandisa dhizaini, mashopu, "maitirwo erabhoritari" ... asi pamusoro pezvose Apple inoda kuti vanhu vabve ipapo, Ndakaenda ndichifara uye zviri nani kuumbwa, kusimbisa hukama nevamwe vanogadzira pasirese.
WWDC 2017 ichaitika, sezvatakataura, kuMcEnery Convention Center muSan José (California) kubva June 5 kusvika 9. Tiketi yekutengesa ichaitwa kuti ishandiswe pa 10.00h PDT uye ichabhadhara madhora zana nemazana matanhatu. Semazuva ese, Apple inopa akati wandei matikiti evadzidzi vari kuda kuwana WWDC 2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inozivisa WWDC 2017 kuti iitwe muna Chikumi 5-9